Ikhalenda Lokusinda le-2020 KBTF lithengisa ngokushesha! - The Kerry Blue Terrier Foundation
Shiya amazwana / Community, Izinqe Zokuhlela / By UJudi Omncane / September 18, 2019 October 12, 2019
Ekugcineni! Ikhalenda le-2020 KBTF Rescue Ikhalenda lilungele ukuthunyelwa ekhaya lakho futhi liyathengisa ngokushesha! kunenombolo ekhawulelwe ekhiqizwe kulo nyaka ngakho-ke sicela u-oda yakho kungekudala! Ikhalenda lonyaka ozayo liphinde ligcwele i-Kerry Blues yethu ethandekayo kanye nama-antics abo amnandi. Ikhasi lekhava lakhiwe futhi kulo nyaka ngumculi odumile emhlabeni uLode Coen! I-Lode yakhele ngobuqili isembozo ukufaka i-30 Kerries…. Futhi lokho kumane nje kuyisiqalo sekhalenda lika-Kerry magic: ngaphakathi kukhona ama-37 amanye amaKerries. Uzojabulela izinyanga ezibonisa izitayela zakamuva zokugqoka zasebusika zokugqoka zikaKerries, uKerry ekuthwesweni iziqu zakhe, iWond Woman Woman Kerry, uKerries ufuna ukudlala, noKerries ayasebenza! Inyanga eyodwa ayinalutho ngaphandle kokuthi uKerries alale… .nalezo zikhundla alala kuzo nakanjani zizokumomotheka inyanga yonke.
Ikhalenda liyi- $ 22 ngokuthumela ngakunye kulo nyaka. Qala ukucabanga ngokuthi ngubani phakathi komndeni wakho nabangane ongayazisa ikhalenda le-Kerry Blue ukujabulela uhlobo lwethu oluyintandokazi unyaka wonke! Futhi ungakhohlwa uku-oda okungenani esisodwa sekhaya lakho. Futhi usindisa njengoHerman, uMolly, uPrecious, uKensi, uFinessa, uBrenden nabanye abaningi kakhulu ngiyabonga kakhulu ngokusekelwa kwakho! Oda amakhalenda akho manje!